Munaasabad loogu dabaal dagayay Midowgii Ciidamada Talyaaniga iyo dhalashadii Jamhuuriyadda Talyaaniga oo Muqdisho lagu qabtay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Munaasabad loogu dabaal dagayay Midowgii Ciidamada Talyaaniga iyo dhalashadii Jamhuuriyadda Talyaaniga oo...
Munaasabad loogu dabaal dagayay Midowgii Ciidamada Talyaaniga iyo dhalashadii Jamhuuriyadda Talyaaniga oo Muqdisho lagu qabtay
Muqdisho (SONNA) Xafladan ayaa waxaa lagu maamuusayey Sanadguuradii kasoo wareegatay markii la mideeyay Ciidamada Talyaaniga iyo dhalashadii Jamhuuriyadda Talyaaniga oo ku beegneyd Afarta Bishan Novembar.
S/sare Carlo Emiliani u qaybsanaha arimaha Ciidamada Talyaaniga u joogo Soomaaliya ayaa sheegay in maalin weyn ay u tahay Dowlada Talyaaniga iyo shacabkeeda.
Safiirka Dawladda Talyaaniga u jooga Soomaaliya Carlo Campanile ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in munaasabadaan ay ku qabtaan Soomaaliya, maadaama ay ka mid tahay sida uu yiri dalalka xiriirka soo jireenka la leh Talyaaniga.
Wadsiir ku xigeenka wasaaradda Gaashaandhiga C/llaahi Colaad Rooble ayaa ugu hambalyeey Dawladda Talyaaniga iyo Shacabkeeda maalintan, wuxuuna Talyaaniga ku amaanay sida ay u garab taagan tahay Soomaaliya, isagoo sheegay in kaalin weyn ka qaadanayaan dib u dhiska dalka.
Ciidamada Talyaaniga ayaa waxaa ay u kala qaybsanaayeen waqooyi iyo Koofur taasoo talyaaniga ka dhigtay laba qaybood waxaana weli la dareemayaa kala qaybsanaantaasi.
Previous articleWadatashigu Waa Udub-dhexaadka Nabadda Iyo Horumarka Dalka. (Faallo)
Next articleUrurka ESESCO oo cambeereeyey gantaalkii maleeshiyada xuutiyiintu ku rideen dalka Sacuudiga